🥇 otomatiki yedhesiki rekubatsira
Chiyero: 4.9. Nhamba yemasangano: 379
Vhidhiyo ye otomatiki yedhesiki rekubatsira
Odha otomatiki yedhesiki rekubatsira
Mumakore achangopfuura, Kubatsira Desk otomatiki kwave kuri kudiwa zvakanyanya, izvo zvinobvuma masevhisi ehunyanzvi kuvandudza ipapo ipapo kunaka kwekutaurirana nevashandisi, kugadzirisa mishumo uye zvinyorwa zvemitemo, kugamuchira nekugadzirisa zvikumbiro, uye kupindura kumatambudziko nekumhanya kwemheni. Kana zviri zve otomatiki, haufanirwe kunetseka kuti imwe nzira yeBatsira Desk inoramba isina kukwana, maneja haapindure kuchikumbiro, asingakwanisi kugadzirira mafomu anodiwa nenguva, kuendesa ruzivo kune nyanzvi dzekugadzirisa, uye chinja kuita zvachose. basa idzva.
Iyo USU Software kuvandudza (usu.kz) yanga ichishanda munzvimbo yeBatsira Desk vashandisi tsigiro kwenguva yakati rebei, iyo inotaridza iyo yemhando yepamusoro yeotomatiki, huwandu hwakasiyana hwezvigadzirwa zveIT, uye inoshanda zvakasiyana uye dzakasiyana siyana. . Haisi chakavanzika, haasi matambudziko ese anogona kuvanzwa neautomation, mamwe zvikanganiso zvechimiro uye kushomeka kwemaneja kunogona kugadziriswa. Marejista eDesk Rekubatsira anopa ruzivo rwakadzama nezvevatengi. Vashandisi havana dambudziko rekutarisa nhoroondo yezvikumbiro, kutsvaga yemahara tenzi kune mamwe maitiro ekushandisa. Muchiitiko che otomatiki, zvakaoma kupotsa nuance iyo inogona kuzoita sarudzo. Kana nyanzvi dzichida zvimwe zvikamu uye zvigadzirwa, midziyo yakakosha, zvikamu zvakasara, ipapo ruzivo runosanganisirwa mushumo, iyo inogadzirirwa neiyo otomatiki chirongwa pakupedza kugadzirisa. The Help Desk platform inobvumira kuchinjanisa data, zvinyorwa, uye graphic files, organically kugovera basa kune vashandi vesangano, kunyatsocherechedza kuchengetwa kwemazuva ekugadzirisa. Pasina otomatiki, zvakaoma kutaura zvinobudirira nevatengi, kuita kushambadzira kweSMS kugovera, uye kungozivisa mutengi kuti basa rapera. Kana pasina matambudziko nemirairo imwe chete kana maviri, saka kana pane akawanda acho, mamwe matambudziko anomuka. Mukana wakaparadzana weBatsira Desk chikuva kugona kuchinjisa chaiwo masisitimu ekushanda mamiriro, ayo akakosha kukosha mune otomatiki. Kambani imwe neimwe inotsanangura mabasa ayo: mabasa emari, kutaurirana nevatengi, hukama hwekushanda, etc. Zvirongwa zveDesk Rekubatsira zvave zvakapararira mumaindasitiri mazhinji nenzvimbo dzebasa, kusanganisira nzvimbo dzesevhisi, masangano ekurapa, masevhisi ekutsigira vashandisi, uye masangano ehurumende anoshanda nesimba. kutaurirana nehuwandu hwevanhu. Automation inoita seyakanakisa mhinduro. Zvakaoma kuwana iri nani mhando inoshanda purojekiti inoshandura zvakanyanya manejimendi mune imwe nyaya yemaminetsi. The Help Desk platform inobatanidzwa mubasa uye ruzivo rwevashandisi ruzivo, inotarisa ikozvino uye yakarongwa mabasa, inogadzirira mitemo nemishumo. Ne otomatiki, iyo yekunyoresa nguva yekunyorera yakaderedzwa zvakanyanya. Vashandisi havafanirwe kutora zviito zvisina basa. Kunyoresa kunotora masekonzi mashoma. Murongi anova nechokwadi chekuti gadziriso yese yebasa yapera nenguva. Kana mamwe mabasa achida zvimwe zvekuwedzera, zvikamu, uye zvisara, ipapo hungwaru hwekugadzira hunokurumidza kutarisa kuwanikwa kwavo kana kubatsira kukurumidza kuronga kutenga.
Iyo Yekubatsira Desk kumisikidza yakanakira vashandisi vese, zvisinei nehunyanzvi hwekombuta uye ruzivo. Ne otomatiki, kugadzirisa kunotariswa padanho rega rega uye nhanho yega. Mashoko acho anoratidzwa nenzira yekuona. Hazvirambidzwe kuzivisa vatengi nezve matanho ekugadzirisa kuburikidza neSMS-kutumira, kuzivisa mutengo webasa, kushambadzira masevhisi emakambani, etc. Vashandisi havana dambudziko rekuchinjana data rekushanda pamirairo yazvino, zvinyorwa, uye graphic mafaira. , kuwana nyanzvi yemahara yerimwe basa. Zviri nyore kuratidza maitiro ekuita pamasikirini kuitira nzwisiso ine musoro mukuita kwemushandi wega wega. Batsira Desk kumisikidza haingotevedzeri zvazvino uye zvakarongwa zviito, asi zvakare inogadzirira otomatiki mishumo, inorekodha mashandiro, uye inotaridza mutengo wemasevhisi.
Nekutadza, iyo otomatiki purojekiti inoshongedzerwa nemodhi yekuchenjerera kuchengetedza maoko edu pamhepo, kutenga zvikamu zvinodiwa panguva, kusapotsa musangano unokosha, kusakanganwa nezvekupedzwa kwemazuva ekupedzisira ebasa, nezvimwewo. masevhisi uye masisitimu haana kuisirwa kuwedzera zvakanyanya kugadzirwa kwesevhisi. Iyo purogiramu inogona kushandiswa nyore nyore nechero nzvimbo yebasa, dhipatimendi rekutsigira komputa, uye sangano rehurumende. Haasi ese sarudzo akaverengerwa mukutanga kumisikidzwa kwechigadzirwa. Zvimwe zvinhu zviripo nemuripo. Tinokukurudzira kuti udzidze rondedzero inoenderana. Sarudzo yekumisikidzwa kwakakodzera kunofanirwa kutanga nedemo vhezheni kuti uzive, kudzidzira, kudzidza iyo inoshanda renji nenzira yekutanga. Maitiro ebhizinesi anoratidzwa ne: tekinoroji iripo yekuitwa kwebhizinesi maitiro, chimiro chiripo cheiyo bhizinesi system, otomatiki maturusi, zvishandiso, maitiro, nezvimwewo, kuve nechokwadi chekuitwa kwekuita. Chiratidzo chikuru chekuongorora kushanda kwemaitiro ebhizinesi nhamba yezvigadzirwa zvemhando yakapihwa, inobhadharwa kune imwe nguva yenguva, nhamba yevatengi vezvigadzirwa, nhamba yeanowanzo mashandiro anofanirwa kuitwa mukugadzirwa kwezvigadzirwa zve. yakatarwa nguva yenguva, mutengo wemitengo yekugadzira, nguva yenguva yekushanda, mari yekudyara mukugadzira, pamwe nemubatsiri ane hunyanzvi seDesk Rekubatsira otomatiki.